Disney Plus တွင် Harry Potter ရှိပါသလား။ - LifeBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 29/05/2022 20:27 | အဆင့်မြှင့်တင် 31/05/2022 08:37 | ပျော်စရာ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော ဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် ရုပ်ရှင်ပလက်ဖောင်းများစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်အချို့ကို ကြည့်ရှုရမည့်နေရာကို မျက်ခြေမပြတ်ရန်မှာ မလွဲမသွေပင်ဖြစ်သည်။. ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင် Disney Plus တွင် Harry Potter ရှိမရှိ၊ သို့မဟုတ် Netflix တွင် Doctor Who ၏နောက်ဆုံးရာသီကို ကြည့်ရှုနိုင်မလား။
သင်ဟာ Harry Potter ဇာတ်ကားတွေကို ရှာဖွေနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Disney Plus မှာ အဲဒါတွေရှိမရှိ သိချင်နေတယ်ဆိုရင် ဒီမှာ အဖြေတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ မကြိုက်နိုင်ပေမယ့်။
1 Disney Plus- သူ့မှာ ဘယ်ကတ်တလောက်ပါလဲ။
2 Disney Plus တွင် Harry Potter ရှိပါသလား။
3 အနာဂတ်တွင် Harry Potter သည် Disney Plus တွင် ပါဝင်မည်လား။
4 Harry Potter ကို တခြားဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။
5 HBO Max မှာ ဘာအပိုရှာတွေ့နိုင်မလဲ။
6 Harry Potter လိုမျိုး ရုပ်ရှင်တွေပါ။
6.3 ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် မျက်လှည့်
Disney Plus- သူ့မှာ ဘယ်ကတ်တလောက်ပါလဲ။
Disney Plus သည် ခမ်းနားသော ကျောက်မျက်ရတနာများကို ရှာဖွေနိုင်သည့် အတွင်းပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။လက်ရှိရော အတိတ်ရော။ ၎င်းသည် အမျိုးအစားအများဆုံးရှိပြီး ကာတွန်းများသာမက အခြားရုပ်ရှင်များနှင့် အမျိုးအစားများကိုပါ ကြည့်ရှုခွင့်ပြုသည့် Netflix နှင့်အတူ ဖြစ်နိုင်သည်။
ပထမတော့ နာမည်ကြောင့် သားသမီးတွေပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားက အဲဒါထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။. ဥပမာအားဖြင့်၊ အဓိကအပိုင်းနှစ်ခုမှာ Marvel နှင့် Star Wars ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူသာလျှင် ကြည့်ရှုသူအများအပြားကို လွှမ်းခြုံနိုင်သော နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်များ၊ စီးရီးများနှင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များစွာကို ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး သူ၏ ပရီမီယာများသည် အများအားဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုများစွာရရှိစေပါသည်။
၎င်းအပြင် သင့်တွင် National Geographic ကဲ့သို့သော မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့် အရေးပါသော ထင်ရှားကျော်ကြားသူများ၏ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော အခြားဇာတ်ကားများပါရှိပါသည်။
တဖြည်းဖြည်း၊ Disney တွင်ပါဝင်သည့် Star platform နှင့်အတူ ၎င်း၏ catalog တွင် အကြောင်းအရာများ ပိုများလာပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် လက်ရှိခံစားနေကြရသည်-
အရာအားလုံး DisneyThe Simpsons အပါအဝင် ရုပ်ရှင်များ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ကာတွန်းဘောင်းဘီတိုများ။
Pixar: အစတုန်းက Disney နဲ့ ပြိုင်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ အခု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အံ့ဩခြင်းရုပ်ရှင်များ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်အတူ ၎င်းတို့ကို ဖန်တီးခဲ့ပုံ။
Star Wars: ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့လည်း
အမျိုးသားရေး ပထဝီ: မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်အတူ။
ကြယ်: ဤနေရာတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ပိုများသော ပရိသတ်အတွက် ရုပ်ရှင်နှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲ နှစ်မျိုးလုံးကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
အမှန်က သင်သည် Disney Plus ကို စာရင်းသွင်းပြီး Harry Potter ရုပ်ရှင်များကို ကြည့်ချင်ပါက၊ ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း တောင်းပန်အပ်ပါသည်။. Disney တွင် ထိုရုပ်ရှင်များကို ၎င်း၏ catalog တွင် မထားရှိခဲ့သလို ယခင်ကလည်း ၎င်းတို့တွင် မရှိခဲ့ပေ။၎င်းတို့ကို Amazon Prime နှင့် အချို့သော Netflix တွင်သာ မြင်တွေ့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှန်တော့၊ ၎င်းတို့သည် ဤပလပ်ဖောင်းများတွင် မရှိတော့ပါ (Amazon Prime သည် သင့်အား ငှားရန် သို့မဟုတ် ဝယ်နိုင်သည်)။
ယခု အမှန်တရားကတော့ Harry Potter ဇာတ်ကားတွေ အားလုံးပါပဲ။Fantastic Beasts နှစ်ကောင်အပါအဝင် ဝတ္ထုတစ်ခုလုံးနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သည့်နေရာတွင် ရှာတွေ့နိုင်မည်နည်း။ HBO Max ကတ်တလောက်တွင် ထားရှိကြသည်။. ၎င်းတို့ကိုကြည့်ရန် သင်သည် ဤပလပ်ဖောင်းသို့သွားပြီး စာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အနာဂတ်တွင် Harry Potter သည် Disney Plus တွင် ပါဝင်မည်လား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်မသိသော အခြေခံမှ စတင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့၊ Warner ရုပ်ရှင်အားလုံးသည် HBO Max မှပိုင်ဆိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိဒေတာကိုအာရုံစိုက်ပါက၊ အမှန်တရားမှာ Disney Plus သည် အနာဂတ်တွင် Harry Potter ၏အခွင့်အရေးကို ရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ အဲဒါက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
Harry Potter ကို တခြားဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။
Harry Potter ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို HBO Max မှာ ရှိတယ်လို့ မပြောခင်မှာဘဲ တကယ်တော့ မင်းမြင်နိုင်တဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။. သင့်တွင် ဤပလပ်ဖောင်းတွင် စာရင်းသွင်းမှုမရှိပါက ၎င်းတို့ကို သင့်အတွက် စာရင်းပြုစုထားပါသည်။
Play Store ကို: ဒါကနည်းနည်းစျေးကြီးပေမယ့် ဒီမှာ ရုပ်ရှင်တွေအကုန်ဝယ်လို့ရပါတယ်။
Apple: ရုပ်ရှင်အားလုံးမပါဝင်ပေမယ့် သူတို့ကို ပုံသေစျေးနှုန်းနဲ့ ငှားလို့ရပါတယ်။
Youtube ကို: Youtube တွင် ၎င်းတို့ကို ငှားဝယ်နိုင်သည်။
အမေဇုံဇာတ်ကား ၈ ကားနှင့် အပိုပစ္စည်းအချို့ပါရှိသော စုဆောင်းသူ၏ထုတ်ဝေမှု။ သင့်တွင် HBO Max မရှိပါက ဤရုပ်ရှင်များကို သင်နှစ်သက်ပါက၊ ၎င်းသည် အသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
HBO Max မှာ ဘာအပိုရှာတွေ့နိုင်မလဲ။
အဆုံးတွင် သင်သည် HBO Max ကိုရယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် သင့်တွင် ၎င်းတို့သည် သင့်အား အခြားပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ပေးမည်မဟုတ်သည့် အပိုတစ်ခုရှိမည်ကို သင်သိထားသင့်သည်။ပရိတ်သတ်တွေ တကယ်ကြိုက်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
E1 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2022 ရက်နေ့တွင် Harry Potter မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။: ဇာတ်လမ်း၏ ဇာတ်ဆောင်များစွာ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ၎င်း၏ နှစ် 20 ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်သည့် Hogwarts သို့ ပြန်သွားရန်၊ ၎င်းတို့သည် သရုပ်ဆောင်များနှင့် မသိရသေးသော ဇာတ်ကားများ၏ လျှို့ဝှက်ချက်အချို့ကို ထုတ်ဖော်ပြသရန် ကြင်နာသနားတတ်ကြသည်။
ဒါကြောင့် ရုပ်ရှင်တွေအပြင်ဇာတ်ကောင်များ မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကို ကြည့်ရှုရန် နောက်ထပ် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခု ရှိပါမည်။ ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မသိခဲ့သမျှ၊
Harry Potter လိုမျိုး ရုပ်ရှင်တွေပါ။
Disney Plus တွင် Harry Potter မရှိသော်လည်း၊ wizard saga ကို ယှဉ်နိုင်သော ရုပ်ရှင်များ မရှိဟု မဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့၊ အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်-
ဤကိစ္စတွင် သူသည် မှော်ဆရာမဟုတ်၊ သို့သော် သူသည် နတ်ကိုးကွယ်သူဖြစ်သောကြောင့် လေ့ကျင့်သင်ယူရန် လိုအပ်သည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နတ်ဘုရားများနှင့် မှော်သတ္တဝါများ၏ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွင် ၎င်းတို့၏စွန့်စားခန်းများကို နေထိုင်ကြပါမည်။
ရုပ်ရှင်နှစ်ကားပဲရှိတယ်။ဇာတ်လမ်းရပ်သွားပေမယ့် ဒီအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်တဲ့ စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။
ဒစ်စနေးမင်းသမီးလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ “စုန်းဆိုး” တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာပြီဆိုရင် ဒီဇာတ်လမ်းကို သဘောကျမှာ သေချာပါတယ်။. တကယ်တော့ ဒါဟာ မင်းသမီးလေးတွေ နဲ့ အရမ်းဆိုးတဲ့ ဂန္တဝင်တွေရဲ့ လှည့်ကွက်တစ်ခုပါပဲ။
သင်တွေ့ရမည့်အရာများထဲတွင် Maleficent ၏သမီး Cruella de Vi၊ Jafar ၏သား သို့မဟုတ် Snow White၊ Grimelda သို့မဟုတ် Grimhilde ၏မကောင်းဆိုးဝါးဘုရင်မ၏သမီးဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကောင်းတဲ့သူအချို့လည်း ရှိမှာဖြစ်သလို ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေထက် စင်မြင့်တစ်ခုအကြောင်း ပြောကြတဲ့အခါ ပိုလက်တွေ့ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားဟာ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မဟုတ်ပေမယ့် အမှန်တရားကတော့ မှော်ဆန်လွန်းပါတယ်။. အဲဒီအထဲမှာ Sage Academy of Magic Training ထဲဝင်လာတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို တွေ့တယ်။ သို့သော်လည်း သူမ၏ မတည်ငြိမ်မှုကြောင့် မိန်းကလေးအား "ပြောင်းပြန်မှော်ပညာ" အတွက် အတန်းတစ်ခုသို့ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
Disney Plus တွင် Harry Potter ရှိ၊ မရှိ သင်သိပြီဆိုလျှင် HBO Max ရှိသင့်သလားဟု သင့်ကိုယ်သင် မေးနိုင်သည် ။ ၎င်း၏ကတ်တလောက်သည် မပြည့်စုံသေးသော်လည်း အမှန်မှာ ၎င်းသည် စျေးအကြီးဆုံးပလပ်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနှင့် မကြာသေးမီက ၎င်းသည် တန်ဖိုးရှိသောကမ်းလှမ်းမှုများများစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည် (ဥပမာ၊ တစ်ဝက်စျေးနှုန်းဖြင့်ထာဝစဉ်ရှိခြင်း) ကို ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » ပျော်စရာ » Disney Plus တွင် Harry Potter ရှိပါသလား။